दाङ : डाक्टरलाई कालोमोसो दल्ने व्यक्तिले दिए भोक हड्तालको चेतावनी – Butwal 24 News
August 31, 2021 Butwal 24 NewsLeaveaComment on दाङ : डाक्टरलाई कालोमोसो दल्ने व्यक्तिले दिए भोक हड्तालको चेतावनी
दाङ – दाङको तुलसीपुरमा रहेको राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका निमित्त प्रमुखलाई दुर्व्यवहार गरेकाे आरोप लागेका अनेरास्ववियुका जिल्ला नेता सर्जन परियारले प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भएर भोक हड्ताल गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै परियारले कानुनलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले स्वयम् उपस्थित भएर न्यायको पक्षमा र झुटा मुद्दाको विरुद्धमा प्रहरीको हिरासतभित्रै भोकै हड्ताल बस्ने चेतावनी दिनुभएको हो ।
राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर विनोद सिंहलाई गएको शुक्रवार कालोमोसो दलेर दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेपछि उहाँ फरार हुनुभएको थियो ।
परियारलाई प्रहरीले त्यस घटनाकाे मुख्य अभियुक्त मानेको छ ।
अन्तिम अपडेट: भदौ १५, २०७८
भरतपुर अस्पतालमा एक वर्षमै सात जना मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट फेरिए
चितवन – भरतपुर अस्पतालमा एक वर्षको अवधिमा सात जना मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट (मेसु) फेरिएका छन् । गएकाे वर्षको भदौदेखि अहिलेसम्म सात जना मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट फेरिएका हुन् ।
एक वर्षको अवधिमा प्राडा. कृष्ण पौडेलले सातौँ मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट हुने अवसर पाउनुभएको हो । अहिले अस्पतालमा कार्यरत डा.रोशन न्यौपानेलाई सरुवा गरेर पौडेललाई मेसु बनाइएको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष डा. भोजराज अधिकारीले जानकारी दिनुुभयो । अधिकारी अध्यक्ष भएयताको पौडेल सातौँ मेसु ​हुनुुभएको हो ।
२०७७ साल भदौ २८ गते डा. श्रीराम तिवारी सरुवालाई सरुवा गरेर डा.राजन पाण्डेलाई मेसु बनाइएको थियो । पाण्डे दुुई महिनापछि मङ्सिर ८ गते सरुवा भएसँगै डा. जगन्नाथ तिवारी मेसु हुनुभएको थियो । त्यसको तीन महिनापछि डा.वासुदेव पाण्डेलाई मेसु बनाइएको थियो । गएकाे वैशाख ४ गते पाण्डे निवृत्त भएपछि पुनः डा. जगन्नाथ तिवारीलाई मेसु बनाइएको थियो।
झण्डै दुुई महिनापछि जेठ १३ गते डा. रोशन न्यौपानेलाई मेसु बनाइएकोमा तीन महिनामा उहाँलाई सरुवा गरेर पौडेललाई मेसु बनाइएको हो । सरकारले आइतवार प्रा डा. पौडेललाई भरतपुर अस्पतालको मेसुमा नियुक्त गरेको हो ।
मेसु अस्थिर हुुँदा अस्पतालको गुणस्तर र सुविधा खस्किँदै गएको छ । अध्यक्ष अधिकारीले विकास समितिले गरेका निर्णय मेसु अस्थिर हुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । यसपटक मेसु भइसकेका स्थानीय व्यक्तिले जिम्मेवारी पाएकाले लामो समय काम गर्ने अवसर प्राप्त हुने र विकास समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको अधिकारीको भनाइ छ ।
यो सङ्घीय अस्पताल हो । छ सय शय्याको यस अस्पतालमा चितवनसहित १९ जिल्लाका बिरामीले सेवा लिँदै आएका छन् । पटक-पटक कार्यकारी प्रमुख परिवर्तन हुँदा अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुँदै आएको छ । हरेक विभागमा बिरामीले पाउनुपर्ने सेवा पाउन सकेका छैनन् ।
दैलेखमा एक जना शिक्षकको घाँटी रेटेर हत्या